-------LIKE NO OTHER-------
နှင့် ဟာသများကို ပျော်ရွှင်ရယ်မောစွာ
Sunday, October 09, 2011 www.kohtet4you.co.cc
ကောလိပ်ကျောင်းတခုရဲ့ ကျောင်းဖွင့်စ ပထမဆုံးရက်မှာ ကောလိပ်ကျောင်းအုပ်ကြီးက
ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို အမှာစကားပြောကြားနေပါတယ်။ ပြီးတော့ လိုက်နာရမယ့်
ကျောင်းသားတွေ မလာရဘူး၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့အိပ်ဆောင်ဘက်ကိုလည်း ကျောင်းသူတွေ
မလာရဘူး၊ ဖောက်ဖျက်တာကိုတွေ့ရင် ပထမအကြိမ် ဒဏ်ငွေ 10 ဒေါ်လာ၊ ဒုတိယအကြိမ်
တွေ့ရင် ဒေါ်လာ 30၊ တတိယအကြိမ်တွေ့ရင် ဒေါ်လာ 50 ဘဲ၊ ကဲ ဘာများ သိချင်တာရှိသေးလဲ"
ကျောင်းသူတွေဘက်က မေးခွန်းတစ်ခု မေးတယ်... ...
"တနှစ်လုံးစာအတွက်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကျမလဲ ဆရာကြီးရှင့်"....တဲ့
စိတ်ရောဂါ အထူးကုဆေးရုံကြီးတွင် ဖြစ်သည်။ ရောက်လာသော လူနာအသစ်က မိမိသည်
သမ္မတကလင်တန် ဖြစ်ကြောင်း ဆရာဝန်ကို ပြောသည်။ ဆရာဝန်ကြီးက ကျန်ဆရာဝန်များ ၏
“ဒီလူနာဟာ ကျွန်တော်တို့ ဆေးရုံမှာ ဒုတိယ ကလင်တန်ပဲ၊ ပထမ ကလင်တန်ရဲ့ အခန်းမှာ
သူတို့နှစ်ယောက်ကို အတူ ထားလိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား၊ တစ်ယောက်ယောက် ကလင် တန်
အစွဲ ပျောက်သွားချင် ပျောက်သွား မယ်၊ ဘယ့်နဲ့လဲ”
နောက်တစ်နေ့ မနက် လူနာ၏ အခန်းများအား လိုက်လံ စစ်ဆေးသည့်အခါ ဆရာဝန်ကြီးက
‘ကလင်တန်’တို့၏ အခြေအနေကို မေးမြန်း စုံစမ်းသည်၊ ကလင်တန် တစ်ယောက်က ဖြေပါ သည်။
“ကျွန်တော်အခု သမ္မတ ကလင်တန် မဟုတ်တော့ဘူး ခင်ဗျ”
“ဝမ်းသာလိုက်တာ၊ ဒါနဲ့ အခု ခင်ဗျား ဘယ်သူလဲ”
နေ့စဉ်နံနက်တိုင်း ဆွမ်းတော်ကပ်လေ့ရှိကြတယ်။ ဆွမ်းတော်အမြဲကပ်လေ့ရှိတဲ့ သူကတော့
မိကြည်ကို အတီးက ချစ်စနိုးလေးနဲ့ အကြည်လို့ဘဲ ခေါ်တယ်။
ဘုရားစင်ရှေ့ မှာ ထိုင်ပြီး အကြာကြီးရွတ်ဖတ်ပြီးမှ ဘုရားကို
“အရဟတာဒိ န၀ဂုဏေဟိ အရဟံအစရှိသော…………ဆွမ်းေ
အဲဒီဆွမ်းတော်ကပ်နည်းကို အတီးတစ်ယောက် အလွတ်မရရှာပါဘူး။ အဲဒါတွေက
တစ်နေ့မှာ မိကြည်တစ်ယောက် ကိစ္စရှိလို့ သူ့ရဲ့ မိဘအိမ်မှာ နှစ်ရက်
၇ှင်ဆွမ်းတော် ကိုနေ.တိုင်းကပ်လှူပါ လို.မှာထားခဲ.သတဲ.
တရုတ်ကြီးက မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ.
တရုတ်ကြီးကလည်း ဆွမ်းတော်ကပ်နည်းကို အလွတ်မရတော. အကြုံအိုက်နေတာပေါ.
ဒါနဲ. အေးအေးငါပဲ ဘုရားကိုကပ်လိုက်ပါ.မယ် ငါ.ကို ဘုရားရဲ. မယ်တော်နဲ.ဇနီးရဲ.
အိမ်မှာ အတီးတစ်ယောက်ထဲဘဲ ကျန်ခဲ့တယ်။ မနက်ရောက်တော့ ထမင်းဟင်း
အတီးတစ်ယောက် ဆွမ်းတော်ပန်းကန်ကို ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ ဆွမ်းနှင့်ဆွမ်းဟင်းကို
ကျကျနန ဆွမ်းတော်ပန်းကန်ထဲ တည့်လိုက်တယ်။
အတီးတစ်ယောက် ဘုရားရှေ့ မှာ ဘာတွေ ရွတ်ဆိုပြီး
“မယ်တော် မာယာ၏ ရင်သွေး
“ ကိုယ်ကလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရတော့မှာပေါ့ … ဘောသင်းထဲမှာ
သေဒဏ်ပေးခြင်းခံရသော အကျဉ်းသားတစ်ဦးအား အာဏာပါးကွက်သားက လည်ပင်းကို
ဓါးဖြင့်ခုတ်သတ်တော့မည့်ဆဲဆဲတွင် အကျဉ်းသားက သူ့လည်ပင်းကို ဓါးဖြင့်ခတ်လျှင်
အပေါ်ပိုင်းကိုသာ ခုတ်ပါရန် တောင်းပန်သည်။ အာဏာပါး ကွက်သားက “ဘာဖြစ်လို့လဲ”
ဟုမေးသည်။ အကျဉ်းသားကပြန်ဖြေလိုက်သည်မှာ “ကျွန်တော့်လည်ပင်းမှာ
အဖုကြီးတစ်ခုရှိတယ်၊ အဲဒီနေရာကို ခုတ်မိရင် သိပ်ပြီးနာမှာစိုးလို့ပါ”။
“ရထားစီးရင် နောက်ဆုံးတွဲကို မစီးနဲ့”
မီးရထားရုံပိုင်ကြီးက ခရီးသည်အား သတိပေးလိုက်သည်။
“တစ်ခုခုဖြစ်ရင် နောက်ဆုံးတွဲက စီးတဲ့သူတွေ အထိအခိုက်ပိုများတယ်”
ခရီးသည်က “ဒါဖြစ်ရင် ဘာဖြစ်လို့ နောက်ဆုံးတွဲကို ချိတ်ထားတာလဲ”
ဇနီး ။ ။ဒါလင်ရေ နက်ဖြန် မေမေ့မွေးနေ့လေ၊ ဘာလက်ဆောင်ဝယ်ပေးရင် ကောင်းမလဲ။ မေမေက
ယောက်ျား။ ။လျှပ်စစ်ကုလားထိုင် ၀ယ်ပေးလိုက်ပါလား။
Tuesday, October 04, 2011 www.kohtet4you.co.cc
Transformer3ရုပ်ရှင်ကားအသစ်လေးတင်ပေးလိုက်ပီဗျိုး။ High Definition နော်။English Subtitle လည်းပါတော့ပိုပီးအဆင်ပြေတာပေါ့။ ကျနော်ကတော့ Download လုပ်ပီးလို့အခုကြည့်နေပီ။ :) Download လုပ်ဖို့အပိုင်း ၆ ပိုင်းပါတယ်နော်
Internet Download Manager 5.07 build9(Latest Version)
Thursday, September 15, 2011 www.kohtet4you.co.cc
Online (eg-Youtube) ပေါ်က file, movie, Song တွေကို download လုပ်ချင်ရင်တော့ Internet Download Manager ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်
Download Speed ကို ၅ဆ အထိ ပိုမိုမြန်ဆန် စေပီး resume support လုပ်ပေးတယ့်အတွက် အထူးကောင်းမွန်လှတယ့် downloader တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်
PS: Download links are from Nyinaymin.org
မိမိရဲ့ကွန်ပြူတာကို ဒုံးပျံစီးနေရလားအောက်မေ့ရလောက်အောင် ဖြစ်ချင်သူများအတွက်...
ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုရင် Tuneup Utilities 2011 က အကောင်းဆုံးလို့ဆိုပါတယ်
အောက်ကဟာကတော့ register လုပ်ဖို့အတွက်ပါ
Name: Any (eg-ur name)
Organization: Any (eg ABCDEFG)
စကားပြောဖော်လိုလား??? သူလေးရှိလို့ အဆင်ပြေသွားစေရမယ် :P
Tuesday, June 08, 2010 www.kohtet4you.co.cc
ဖြစ်ဖြစ်.....စက်ရုပ်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုစကားပြောလို့ရပါတယ်...
အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ဖို့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်....
ပျော်စရာကောင်းပြီ သူတို့ ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ mouse ကိုတင်ပြီးရွေ့ရင်လဲ
(စက်ရုပ်ကိုကိုနဲ့ ပြောချင်ရင် ဒီနေကိုနှိပ်ပါ )
(စက်ရုပ်မမနဲ့ ပြောချင်ရင် ဒီနေကိုနှိပ်ပါ )
P.S: ကိုယ်ပြောချင်တယ့်စကားကို You Say ဆိုတယ့် box မှာပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်
Full Free Softwares (22)
Ko Htet (4)
Copyright © MY LIFE IS MY CREATION | Powered by Blogger